थारुकल्याणकारीणी सभाले गरे राज्य मन्त्रि मेहतालाई सम्मान -
थारुकल्याणकारीणी सभाले गरे राज्य मन्त्रि मेहतालाई सम्मान
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १८, २०७३ समय: ५:२९:५४
ईनरुवा,१८ बलहा /सुनसरी क्षेत्र नं. ४ नेपाली काग्रेशबाट दोस्रो संबिधानकालागी बनेका सांसद सिताराम मेहता राज्य मन्त्रिहुदा गृहजिल्लामा सम्मानको ओईरो लागेको छ । ईनरुवा ९ बलाहामा स्थानियहरुले सनिवार भब्य सम्मान गरेका हुन् ।
थारु कल्याणकारीणी सभा नगर समिति ईनरुवा र थारु जागृति क्लवको संयुक्त आयोजनामा एक कार्यक्रमगरी सम्मान गरेको हो । कार्यक्रममा मेहताले आफनो कार्यकालमा सुनसरीका कुना– कुनामा बिकास निर्माणका कार्यक्रम ल्याउने बताए । ईनरुवा देखि कप्तानगंज र देवानगंज हुदै बिराटनगर सम्म बाटोलाई स्तर उनन्ती गर्ने प्रतिबद्धता गरे । त्यसैगरी झुम्का देखि रामधुनी मन्दिर सम्म ,ईनरुवाबाट डुम्राहा हुदै झुम्का जोडनेबाटोलाई बिशेष जोडदिने आफनो लिष्टमा रहेको बताए । आयोजकले बलहाबाट मधेसा हुदै रामधुनीभासि जोडनेबाटोलाई पनि लिष्टमा पार्नकालागी अनुरो गरे । मन्त्रि मेहताले देश र जनताको हितमा काम गर्ने भन्दै स्थानियको कुरालाई राज्य सम्म पुरयाउने र राज्यको कुरा स्थानिय सम्म पुरयाउने आश्वासन दिनु भयो । कार्यक्रममा स्वगत मन्तब्य प्रतिमा चौधरीले दिईरहदा नेपाली भाषामा कठिनाई हुदा मन्त्रि मेहताले थारुभाषामै बोल्न आग्रह गर्दा चौधरी स्पष्टरुपमा स्वगत मन्तब्य दिएकी थिईन । थारु कल्याणकारीणी सभा जिल्ला सचिव मनोज चौधरीले सभाले अगाडी सारेको ८ प्रदेश पहिचान सहितको खाकालाई सत्तापक्षले ध्यानदिनकाली सुझाव दिए ।
थारु कल्याणकारीणी सभा नगर समिति ईनरुवाका सभापति मोहि नारायण चौधरीको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा अतिथीहरुले कार्यकाल सफलताको कामना गरे । उपस्थित अतिथीहरुमा राप्रपा नेपालका केन्द्रिय सदस्य गोपालकोईराला,संघय समाजवादि पार्टिका एस. एन. मेहता लगायतका अतथीहरुले कार्यकाल सफलताको कामना गरे । कार्यक्रममा उपस्थित सम्पुर्ण अतिथीहरुलाई प्रतिमा चौधरीले स्वागत गरेकी थिईन भने डि.सि चौधरीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।